Ny programa famonjena | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Momba ny fiafaran'ny filazantsarany, dia azo vakiana ireto fanehoan-kevitra mahavariana ireto ireto: «Nanao famantarana maro hafa i Jesosy teo anoloan'ireo mpianany, izay tsy voasoratra ato amin'ity boky ity ... Fa raha tokony hosoratanao tsirairay avy ny olona iray, dia hoeritreretiko. , izao tontolo izao dia tsy mino ny boky tokony hosoratana » (Jaona 20,30:21,25;). Miorina amin'ireto fanamarihana ireto sy ny fiheverana ny tsy fitovian'ny Evanjely efatra, dia azo fambara fa tsy nosoratana ho toy ny soritra feno tamin'ny fiainan'i Jesosy ny fitantarana. Nilaza i Jaona fa natao tamina ny asa sorany "mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary mba hanananao fiainana amin'ny anarany, amin'ny finoana" (Jaona 20,31). Ny tena ifantohan'ny Filazantsara dia ny fitoriana ny vaovao tsara momba ny Mpamonjy sy ny famonjena nomena azy.
Na dia voavonjy i John tamin'ny famonjena 31 aza (Fiainana) mifandraika amin'ny anaran'i Jesosy, ny Kristiana dia miteny fa voavonjin'ny fahafatesan'i Jesosy. Io fanambarana fohy io dia marina loatra, saingy ny hany firesahana momba ny famonjena amin'ny fahafatesan'i Jesosy dia mety hanakona ny fahafenoan'ny maha izy azy sy ny nataony ho famonjena antsika. Ny zava-nitranga tamin'ny Herinandron'ny herinandro dia mampahatsiahy antsika ny fahafatesan'i Jesôsy - na izany aza tena zava-dehibe - dia tokony jerena amin'ny toe-javatra midadasika kokoa, izay ahitana ny Fahatongavan'ny Tompontsika, ny fahafatesany, ny fitsanganany ary ny fiakarany. Izy rehetra dia ilaina, sangan'asa misy ifandraisany amin'ny asany famonjena - ny asa manome antsika fiainana amin'ny anarany. Noho izany, mandritra ny Herinandro Masina, ary koa mandritra ny taona sisa, te-hahita ny asa tonga lafatra famonjena isika amin'i Jesosy.
Ny nahaterahan'i Jesosy dia tsy ny fahaterahan'ny olona mahazatra. Ny maha-tokana azy amin'ny lafiny rehetra dia ahitana ny fiandohan'ny Fahatongavan'Andriamamanitra Izy tenany.Tamin'ny nahaterahan'i Jesôsy dia tonga tao amintsika Andriamanitra tahaka ny maha-olombelona ny olombelona rehetra hatramin'ny nahaterahan'i Adama. Na dia nijanona ho toetrany aza Izy, ny Zanak'Andriamanitra Mandrakizay dia nanaiky ny fiainan'ny olombelona manontolo - hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Amin'ny maha-olona azy, dia Andriamanitra tanteraka sy olombelona tanteraka izy. Ao anatin'ity fanambarana manafintohina ity dia mahita dikany mandrakizay izay mendrika ny fankasitrahana mandrakizay.
Miaraka amin'ny maha-tonga nofo azy, ny Zanak'Andriamanitra mandrakizay dia nivoaka hatramin'ny mandrakizay ary amin'ny maha-olombelona antsika avy amin'ny nofo sy ra ao amin'ny fahariany, izay nofehezin'ny fotoana sy ny habaka. "Ary ny Teny dia tonga nofo ary nonina teo aminay, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra ho ny Zanaka lahitokan'ny Ray, feno fahasoavana sy fahamarinana" (Jaona 1,14). Eny tokoa, Jesosy dia olona tena misy amin'ny maha-olombelona azy, fa tamin'ny fotoana iray, dia Andriamanitra tanteraka koa izy - raha ny hevitry ny Ray sy ny Fanahy Masina. Nanatanteraka faminaniana maro ny fahaterahany ary ahitana ny fampanantenantsika famonjena.
Tsy nifarana tamin'ny nahaterahan'i Jesosy ny olombelona, ​​fa nitohy mihoatra ny androm-piainany teto an-tany ary efa fantatra ankehitriny amin'ny fiainany olombelona be voninahitra izy. Ny mety ho nofo (ie, tonga nofo) Ny Zanak'Andriamanitra dia mijanona ho mitovy amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina - ny toetrany masina dia feno sy tsy manam-paharoa, izay manome ny fiainany amin'ny maha-olombelona azy. Izao no voalaza ao amin'ny Romana 8,3: 4: "Fa ny zavatra tsy hain'ny lalàna noho ny fahalemen'ny nofo, dia nataon'Andriamanitra: Nandefa ny zanany lahy araka ny nofo mpanota izy ary noho ny ota ary nanameloka ny ota amin'ny nofo, mba ho tanteraka amintsika ny fahamarinana izay nangatahan'ny lalàna, izay miaina ankehitriny tsy araka ny nofo, fa araka ny fanahy "- nanazava i Paul fanampiny fa" hovonjeny amin'ny fiainany isika " (Romana 5,10).
Ny fiainana sy ny asan'i Jesosy dia mifamatotra roa - tafiditra ao amin'ny nofo izy ireo. Jesosy-Andriamanitra olombelona dia Mpisoronabe tonga lafatra sy mpanelanelana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Lasa anisan'ny natiora izy ary nahatonga ny fahamarinana ho an'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fiainana tsy misy ota. Io zava-misy io dia ahafahantsika mahatakatra ny fomba ahafahany mamboly fifandraisana, amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Na dia mazàna mankalaza ny fahaterahany amin'ny Krismasy isika dia tafiditra ao anatin'ny fiderana rehetra ataontsika ny zava-nitranga tamin'ny fiainany manontolo - na dia nandritra ny Herinandron'ny Holy Week. Ny fiainany dia manambara ny toetran'ny famonjena antsika. Jesosy, tamin'ny endriny, dia nampifanatona Andriamanitra sy olombelona lavorary.
Ny sasany dia diso ny filazalazana fohy fa voavonjy tamin'ny fahafatesan'i Jesosy isika noho ny hevi-diso fa ny fahafatesany dia sorona fanavotana izay nahatonga ny fahasoavana ho an'Andriamanitra. Mivavaka aho mba ho fantatsika rehetra ny fahalavoana ao an-tsaina.
Nanoratra i TF Torrance fa tamin'ny fahafatesan'i Jesosy manoloana ny fahazoana tsara ny sorona taloha ao amin'ny Testamenta Taloha dia tsy ekenay ny fanatitra mpanompo sampy noho ny famelan-keloka, fa ny fijoroana ho vavolombelona mahery vaika momba ny sitrapon'Andriamanitra tsara (Sorompanavotana: ny olona sy ny asan'i Kristy, p. 38-39). Ny fombafomba firavoravoana nataon'ny mpanompo sampy dia nifototra tamin'ny fotokevitra niverenany, raha toa kosa ny rafitra sorona nataon'ny Isiraely dia miankina amin'ny fitsipiky ny famelan-keloka sy fampihavanana. Raha tokony hahazo famelan-keloka amin'ny alàlan'ny sorona atao sorona izy ireo, dia hitan'ny Isiraelita fa navelan'Andriamanitra hanafaka ny fahotany izy ireo ary hihavana aminy.
Ny fanatitra ho an'ny Isiraely dia natao hanamarinana sy hanehoana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany amin'ny fanondroana ny hoavin'ny fahafatesan'i Jesosy, izay omena amin'ny fampihavanana amin'ny Ray. Tamin'ny fahafatesany dia nandresy an'i satana koa ny Tompontsika ary nandray ny fahefan'ny fahafatesana koa: "Satria ny zaza ankehitriny dia nofo aman-drà, dia nanaiky izany ihany koa izy, ka rehefa nahafatesany dia nesoriny ny hery izay nanana fahefana tamin'ny fahafatesana. dia ny devoly ary manavotra ilay tsy maintsy ho mpanompo amin'ny fiainana rehetra »noho ny tahotra ny fahafatesana» (Hebreo 2,14: 15). Nanampy koa i Paoly fa "tsy maintsy manjaka i Jesosy mandra-panaon'Andriamanitra ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony". Ny fahavalo farany horavana dia ny fahafatesana » (1 Korintiana 15,25: 26). Ny fahafatesan'i Jesosy dia mampiseho ny endrika fanavotana amin'ny famonjena antsika.
Amin'ny alahady Paska dia mankalaza ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty isika, izay manatanteraka faminaniana maro ao amin'ny Testamenta Taloha. Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia nanasongadina fa ny famonjena nataon'i Isaka talohan'ny fahafatesana dia taratry ny fitsanganana amin'ny maty (Hebreo 11,18: 19). Avy amin'ny bokin'i Jona dia fantatsika fa "telo andro sy telo alina" teo amin'ny vatan'ny trondro lehibe (Jona 2, 1). I Jesosy dia nanonona an'io tranga io momba ny fahafatesany, ny fandevenana azy ary ny nitsanganany tamin'ny maty (Matio 12,39-40); Matio 16,4: 21 sy 2,18; Jaona 22).
Mankalaza ny fitsanganan'i Jesôsy amin'ny fifaliana be izahay satria mampahatsiahy antsika fa tsy farany ny fahafatesana. Fa kosa, maneho dingana eo anelanelan'ny lalantsika mankany amin'ny ho avy - fiainana mandrakizay amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny Paska dia mankalaza ny fandresen'i Jesôsy ny fahafatesana sy ny fiainana vaovao ananantsika isika. Miandrandra am-pifaliana izahay amin'ny fotoana izay itenenana ny Apokalypsy 21,4: «[...] ary hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo, ary tsy hisy intsony ny fahafatesana, na ny fijaliana, ny fitarainana na ny fanaintainana; dia ho bebe kokoa; satria lasa ny voalohany. » Ny fitsanganana amin'ny maty dia fanantenan'ny famonjena antsika.
Nanoratra toy izao i Robert Walker, tao amin'ny fampidirana ny Sorompanavotana an'i Torrances: "Miaraka amin'ny fitsanganan'ny maty dia manintona ny maha-olombelona antsika i Jesosy ary mitondra azy ireo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny firaisana sy vondrom-piaraha-tia amin'ny Trinite." Toy izao no nametrahan'i CS Lewis azy: "Eo amin'ny tantaran'ny Kristiana dia hidina Andriamanitra ary manomboka eo indray." Ny vaovao mahafaly dia ny nanandratan'i Jesosy antsika niaraka taminy. «... ary natsangany ho antsika Izy ary napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hanehoany ny haren'ny fahasoavany amin'ny fotoana ho avy, amin'ny hatsarany antsika ao amin'i Kristy Jesosy» (Efesiana 2,6: 7).